Xildhibaano xulufada Xasan Sheekh u badan oo dacwad ka gudbiyey Mahad Cawad - Caasimada Online
Home Warar Xildhibaano xulufada Xasan Sheekh u badan oo dacwad ka gudbiyey Mahad Cawad
Xildhibaano xulufada Xasan Sheekh u badan oo dacwad ka gudbiyey Mahad Cawad
Muqdisho (Caasimada Online) – Xildhibaanada baarlamaanka Soomaaliya oo ka careysan baaqashada kulanka baarlamaanka oo maalintii labaad baaqday ayaa dacwad ka gudbiyay guddoomiye ku xigeenka labaad ee Baarlamaanka.
Qoraalka kasoo baxay xildhibaanada baarlamaanka lag shaaciyay inay ka dacwoonayaan baaqashada kulanka baarlamaanka inuu door ku leeyahay guddoomiye ku xigeenka labaad ee baarlamaanka Mahad Cabdalla Cawad.
Xildhibaanada dacwad gudbiyey ayaa waxaa u badan xulufada Xasan Sheekh ee ku midoobay xisbiga nabadda iyo horurmarka ee UDP.
Qoraalka ayaa sidoo kale lagu sheegay in loo baahan yahay in arirntaan Guddoonka baarlamaanka uu wax ka qabto.
Hoos ka akhriso qoraalka xildhibaanada qaar ay soo saareen